EVENTS | ABOUT US | PHOTOS | MEMBERS | LINKS | CONTACT US |
Myanmar allows some media at Suu Kyi trail ● မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် အလွတ်သဘောဆွေးနွေး irrawaddy
အခြား Links များ |
SHRF (Shan)Swedish Burma Committee
Burma Digest Free Burma Political Prisoner
Lessons in Democracy by Roland O. Watson
● စစ်တပ်က မီးရှို့သဖြင့် ကရင်ရွာသား ၁၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေး more detail...
● စစ်အာဏာသိမ်း နီဂျာနိုင်ငံ အာဖရိကသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းmore detail ...
●စစ်အစိုးရအား ပိုမိုဖိအားပေးရန် တရုတ်၊ ရုရှနှင့် အိန္ဒိယကို ဥရောပပါလီမန် တောင်းဆို
●အောင်လံမှ လယ်သမားများ ပြစ်ဒဏ်လျှော့ လွှတ်မိန့်ကျ
●ကလေးစစ်သားနှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းများ ဖွင့်နေသော်လည်း ကလေးငယ်များ စစ်သား အဖြစ် စုဆောင်းခံနေရ more detail...
● လှည်းကူးမြို့တော်မှ ကလေးစစ်သားmore detail...
● လယ်ယာမြေအသိမ်းခံ တောင်သူ ၁၀ ဦး ပြန် လွတ်လာ more detail...
● နာဂစ်ဒေသတွင် လူပေါင်း ၅ သိန်းခန့် အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်နေဆဲ more detail..
● တပ်မတော်သားအဖြစ် ဂုဏ်မယူလိုတော့သူ.more detail..
CHILD SOLDIER AND OTHER NEWS (BURMA) မြန်မာနိုင်ငံမှ ကလေးစစ်သားများနှင့်အခြားသတင်းများ
● မြန်မာစစ်တပ်ထိုးစစ် ကရင်လူထု အိုးအိမ်ပစ် ထွက်ပြေးရ
● ရွှေကျင်ရေအားလျပ်စစ်စီမံကိန်းကြောင့် ရွာ ၂၀ကျော် ရေနစ်မြုပ်
● ဗန်းမော်ခရိုင်တွင် ဒေသခံလူငယ်များကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
● မြဝတီရုပ်သံလိုင်း ထုတ်လွှင့်ပြသရန် လူထုထံမှ ငွေအဓမ္မကောက်
● ကျနော်လို ကလေးတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဘူး
● ဗန်းမော် ခယက ကားချောဆွဲ၊ ဆက်ကြေးတောင်း
● ကလေးစစ်သား စုဆောင်းသူ ၄၄ ဦး အရေးယူခံရ
● အသက် မပြည့်သူ ကလေးများကို ပြည့်သူ့စစ် အဖွဲ့ထဲသွင်း
● နအဖစစ်တပ်များ ၀င်ရောက်သောင်းကျန်းမှုကြောင့် ရွာသား ၅၀၀ကျော် တောထဲ ပြေးပုန်းနေရ
DEMOSTATION IN LJUSDAL CITY, MAY 16, 2009
More detail - အပြည့်စုံသို့
About Us | Events | Contact Us | ©2009 SBHRA . All Rights Reserved. Designed By Htay Zayar & Aung Hein. Email- info@sbhra.se